Senegal · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Senegal
Ny Antony Itiavan'ny Governemanta Senegaley ireo Fihetsiketsehana Manohitra ireo Mpifankatia Mitovy Fananahana
Manoratra tsikera mamay momba ny fihetsiky ny governemanta manoloana ireo hetsipanoheram-bahoaka ao Senegaly ny "Blog politique au Senegal". Ratsy: hetsipanoherana ireo fanambadiana an-tery setra ny ankizivavy. Tsara: hetsipanoherana iantsoana ny fandripahana ireo olona tia ny mitovy fananahana aminy.
Frantsa, Amerika, Afrika: Ny Loka “Y'a Bon”
Tamin'ny 17 Martsa 2009, nanomboka ny "Loka Y'a Bon " ny vondrona antsoina hoe les Indivisibles [Fr] , fanomezam-boninahitra iray hafa kely, izay natolotra ho an'ireo mpanao politika, mpanao gazety, sy mpiasam-panjakana izay nandray anjara tamin'ny fanelezana ny fanavakavaham-bolokoditra tao Frantsa.
Fahalalahàna miteny24 Desambra 2018
Karaiba09 Jona 2017
Cote d'Ivoire04 Septambra 2015
Tantara mikasika ny Senegal
Fampandrosoana 01 Janoary 2020
...lohahevitra "krizy, ady ary fitsabahana ara-tafika ataon'ny vahiny mba hifehezana ny loharanonkarena : toy inona no mba asetrin'ireo hetsika sôsialy afrikàna izany?" .
Kenyà 10 Oktobra 2019
Inona ny hip hop Afrikanina? Nahasarika ny sain'ny tanora ny hip hop, izay mamokatra tarika mpanao rap, break dance ary ireo b-boys. Maro no mihevitra fa ny fakany dia miverina any amin'ny vanim-potoanan'ny Mpampita hevitra araka ny fombandrazana afrikanina, ny hafa kosa milaza fa Afrikana-Amerikanina manokana izany.
Afrika Atsimo 14 Mey 2019
Tsy mbalax ny gadona Soukous, sady tsy afro-funk , tsy rumba, tsy Ethio-jazz, tsy Afrobeat [...] tsy Merseybeat ny Metal
Maoritania 19 Novambra 2018
Senegal : Demba Dia, mpihira nirotsaka ho politisiana
Mediam-bahoaka 29 Aogositra 2018
[...] tsy maningana i Senegal amin'ny fahitàna mpisehatra, mpiangaly gadona rock, mpilalao baolina kitra mirotsaka manao politika. Manana ny azy koa i Madagasikara amin'ny fifidianana ho atao amin'ny Novambra 2018: Dama Mahaleo,
Fitantanam-pitondrana 28 Avrily 2018